रेशम चौधरीबारे अायाे देश नै हल्लाउने नयाँ खबर ! प्रहरीले अब के गर्ला ? - Sudur Khabar
रेशम चौधरीबारे अायाे देश नै हल्लाउने नयाँ खबर ! प्रहरीले अब के गर्ला ?
Ganesh Thagunna December 15, 2017 Special News, प्रदेश नं.७ 0
Total Reader : 661
काठमाडौं– उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी नभएको ठहर गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा चौधरीलाई टीकापुर घटनाको पीडितका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
ओली र प्रचण्डले गरे देउवामाथि १५ हमला
Breaking News..एमाले बाट विजयी बनेका दिपक मनाङ्गेलाई ५ वर्षको जेल सजाय, सर्वोच्चको फैसलाले सांसद पद गुम्यो